Murashaxiin war kasoo saarey heshiiska dowladda iyo Ahlu Sunna
Siyaasiyiintan ayaa sidoo kale baaq waxay u direen Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya – Laba kamid ah murashaxiinta doorashooyinka Galmudug ayaa soo dhaweeyay heshiiska ay kala saxiixdeen Dowladda Soomaaliya iyo ururka Ahlu Sunna Waljameeca.
Cabdiraxmaan Odowaa iyo Kamaal Guutaale oo Khamiista maanta ah qoraalo soo dhigay barahooda bulshadda ayaa bogaadiyey heshiiska.
Xukuumadda federaalka ah ayey ku booriyeen inay si hufan ku dhameystirto dedaallada maamul-dhisidda Galmudug.
Odowaa ayaa ka tirsan xisbiga Midowga Nabadda iyo Horumarka oo uu hogaamiyo Xasan Sheekh, halka Guutaale uu kamid yahay hogaanka xisbiga Wadajir ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Qoraalka Murashax Odowaa:
Waxaan bogaadinayaa Heshiiska Siyaasadeed ee ay Dowladda Federaalka iyo Ahlu Suna Waljamaaca ka gaareen geedi socodka maamul u sameynta Galmudug.
Waxaan amaanayaa dhamaan masuuliyiintii iyo indheer garadkii gacanta ka geysatey wadaxaajoodkii dheeraa ee arinkan xalka looga gaarey.
Waxaan dowladda ugu baaqaynaa in inta dhimman geedi socodka uu ahaado mid dhala Galmudug mid ah.
Waxaan bogaadinayaa heshiiska laga gaaray khilaafkii ku saabsanaa qaab dhismeedka Galmudug, waxaa farxad u ah shacabka reer Galmudug in haddii khilaafkii ragaadiyey dowladnimadoodii uu dhamaaday ay maantay u billaabatay waa cusub oo Wadajir iyo isku duubni ah.
Labada dhinac ee heshiiska gaaray ee Dowladda Federaalka iyo Culima'udinka Ahlu Sunna Wal Jamaca waxaan si gooni ah oga mahad celinayaa tanaasulaadkii ay sameeyeen iyo is fahankii ay ka gaareen arrimihii murugsanaa ay Soo jiitamayay muddada dheer.
Waxaan Dowladda ku dhiira gelinayaa si loo soo afjaro khilaafyada dhiman iney sidoo kale xalliso tabashooyinka ay qabaan beelaha reer Cadaado iyo reer Ceel Dheer ee ku saabsan Geedi socodka dhismaha Galmudug iyo beelihii kale oo iyagana wax tirsanaya.
Si uu u noqdo Geedi socodka dhismaha Galmudug mid loo dhan yahay, kuna dhaca jawi dimuqraadi ah waxaan u baahanahay in ciidamada xad dhaafka ah ee jooga magaada Dhusamareb loo saaro magaalada bannaankeeda, Gudaha magaaaladana lagu reebo ciidan ammaanka suga ee isku dhafka ah.
Waxaan sidoo kale rajeynayaa in liisaska odayaasha aysan ka baxsanaan kuwii ka mid ahaa 135tii iyo kuwii Cadaado horey ugu soo dhisay Galmudug tii hore so loo helo meel laga tixraaco Dowlad dhiska Galmudug, waxaan sidoo kale odayaasha ka rajeynaynaa iney soo xulaan xildhibaanno ka bixi kara howsha maantay hortaalla Galmudug, howshoodana ku gudan kara daacadnimo, aqoon iyo ka hormarinta danta guud midda gaarka ah.
Heshiiska cusub ayaa xeerinaya in Ahlu Sunna ay 20-Xildhibaan ku yeelaneyso baarlamaanka cusub ee Galmudug, kaas oo xulistiisa la filayo in ay ka bilaabato Dhuusamareeb, caasimada maamulkaas.
Dowladda Soomaaliya oo "xirtay" mas'uuliyiin taabacsan Ahlu Sunna
Soomaliya 27.02.2020. 08:00
Hogaanka Sarre ee Galmudug ayaa la sheegay in uu soo saarey amar ka dhacan ah xarunta Inji.
Ahlu Sunna oo qaadacdey shuruudaha Guddiga doorashada Galmudug
Soomaliya 25.12.2019. 13:05
Soomaaliya: Gudi doorasho oo looga dhawaaqay Dhuusamareeb
Soomaliya 16.09.2018. 17:11
Madaxweyne Farmaajo oo dib ugu laabtay Cadaado [Qorshaha]
Soomaliya 23.01.2018. 11:16
Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka oo Xabsi Guri la dhigay
Soomaliya 12.01.2018. 22:24
GALGADUUD: Dilal kala duwan oo ka dhacay magaalada Guriceel
Soomaliya 15.08.2017. 09:30
Rayidka Dhuusamareeb oo "bilaabay" in ay garsoor u doontaan Al-Shabaab
Soomaliya 26.02.2020. 13:25
Xildhibaanada Ahlu Sunna ku metelaya Galmudug oo la shaaciyey
Soomaliya 23.12.2019. 12:22
Maxay kawada hadleen Khayre iyo Qoor Qoor? 22.09.2020. 10:53
Khaadleyda u barooraneysa suuqa Soomaaliya oo cadaadinaya Uhuru 22.09.2020. 07:00
Dagaalameyaal Al-Shabaab ah oo weerar gaadmo ah lagu khaarijiyey 22.09.2020. 06:32
Ilhaan Cumar oo ka jawaabtay weerar uu kusoo qaadey Donald Trump 22.09.2020. 06:25
Tobanaan muhaajiriin ay Soomaali ku jiraan oo xabsi loo dhaadhiciyey 22.09.2020. 06:20
Sarkaal ka tirsanaa ilaalada Villa Soomaaliya oo meydkiisa la helay 21.09.2020. 22:10